The steppe wolf: Ihe osise ndị mara mma nke Hermann Hesse | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Steppe wolf bụ akwụkwọ ọgụgụ isi sitere n'aka onye edemede na onye edemede edemede Switzerland na German Hermann Hesse. Wepụtara na 1927 (nsụgharị ikpeazụ pụtara otu afọ gachara), Der steppenwolf - Aha mbụ na German - bụ akwụkwọ e toro na Europe nke ukwuu ma nwee ọganiihu nbipụta. Otú ọ dị, onye edemede Teutonic mere mkpesa ugboro ugboro na a ghọtahiere ya.
Na nke a, ndị nkatọ na-ede akwụkwọ na-egosi na akụkọ anụ ọhịa wolf bidoro na ọgba aghara ime mmụọ miri emi Hesse tara ahụhụ na mmalite afọ 20. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ bụ otu nnukwu akwụkwọ edemede German nke narị afọ nke XNUMX. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, a na-ewere aha a dị ka ihe kachasị mma nke onye edemede bụ onye Nobel Prize for Literature ghọtara ọrụ ya na 1946.
1 Nnyocha nke nzọụkwụ Wolf
1.1 Ihe banyere ọrụ
1.3 Ihe gbasara akụrụngwa gbasara nyocha
2 Nchịkọta nke Nzọụkwụ Wolf
2.2 Ihe odide Haller
2.3 Anụmanụ abalị
2.4 Mkpebi ahụ
3 Banyere onye edemede, Hermann Hesse
3.1 Ọmụmụ na nwata
3.3 Idebe akwụkwọ na alụm di na nwunye
3.3.1 Di na nwunye
3.4 Ọrụ ndị a kacha mara amara
3.5 Ihe nketa
Nyocha nke Steppe wolf
Ihe banyere ọrụ
Der steppenwolf Ọ bụ isiokwu nke-apụghị ịgụta ọnụ adian na agụmakwụkwọ; ọtụtụ n’ime ha na-adaba n’ịkọwa ọdịdị ọdịdị akwụkwọ nke akwụkwọ ahụ. N'ezie, Enwere myirịta dị n'etiti psyche nke protagonist nke akụkọ na ndụ Hesse. N'ezie, n'agbata 1916 na 1917 ọ nwere ndidi nke Dr. Joseph B. Lang, ngalaba nke onye a ma ama Dr. Carl Gustav Jung, onye onye edemede ahụ mechara zute.
Psychotherapy dị mkpa n'ihi nsogbu ịdị adị nke onye edemede kpatara ọnwụ nna ya gbakwunye ajọ ọrịa nke nwa ya nwoke Martin. Na mgbakwunye, nwunye ya nke mbụ tara ahụhụ oge (alụm di na nwunye ahụ enwetaghị ọhụụ ahụ). Mgbe ha gbara alụkwaghịm na 1923, Hesse gafere oge ọzọ nke iche na ịda mbà n'obi, nke abụọ pụtara ìhè na akụkọ ihe mere eme nke anụ ọhịa wolf.
The nkuchi wolf (Edhasa ...
Arụmụka nke ederede gosipụtara iro nke onye edemede Teutonic megide ọha mmadụ bourgeois nke oge ya. N'otu aka ahụ, Hesse na-eji ihe atụ nke anụmanụ ahụ atụnyere ụdị ndụ abụọ: mmadụ na anụ ọhịa wolf. N'aka nke aka, mmadu na-eche banyere omume mmepeanya, echiche oma, ezigbo echiche na echiche nke ima nma ihe.
Kama, nkịta bụ onye echiche ya banyere gburugburu ebe obibi ya na ndị gbara ya gburugburu na-eme ka ịkwa emo na ịkwa emo oge niile. Ihe ịrụ ụka adịghị ya na anụ oriri nke anụ ọhịa bụ onye iro nke ụmụ mmadụ na omenala ọha nabatara iji nwee ezi ọdịdị mmadụ. A) Ee, akụkọ a gbara gburugburu arụmụka banyere omume na-adịghị akwụsị akwụsị n'ime isi onye isi akụkọ ahụ.
Ihe gbasara akụrụngwa gbasara nyocha
Nkata ahụ bụ nyocha nke uche nke Harry Okpokoro, onye protagonist, onye edemede na onye ode akwukwo nke maara ihe, nke uche na-agbawa. Ọ bụ ezie na site na mbido nke a Ọ dị ọcha ma nwee nsọpụrụ, ngwongwo dị n’ime ụlọ gị bụ ihe mbụ na-egosi ọgba aghara dị gị n’ime. Ka ihe na-eme, a ga-amata njedebe dị n’etiti eziokwu na nrọ.
Na Haller, mmetụta miri emi nke obi amamikpe na-esoro echiche efu nke ịdị ebube. N'otu ụzọ ahụ, o nwere ọgụgụ isi dị elu nke na-enye ya ohere iji ekele maka nka na iji nwayọ were ọdịdị nke ihe ndị gbara ya gburugburu. Agbanyeghị, otu ọgụgụ isi ahụ na-eduga ya ịhapụ onwe ya na ndagwurugwu ya nwere ọgụgụ isi n'etiti etiti echiche amamihe ya.
Na nchikota nke Steppe wolf
Onye mbu bu onye mbu (o gosiputara onwe ya dika “onye ndezi” ihe odide Harry) bu nwa nwanne nke onye nwe ego ezumike nka bu ebe onye mbia no. Onye na-ede akụkọ a site n'oge ruo n'oge na-ekwupụta echiche ya banyere Haller, onye ọ kọwara dị ka nwoke nwere ọgụgụ isi ma na-eche echiche, ma na-enwe nsogbu ime mmụọ.
Ihe odide Haller
Isi agwa ọ na-akọwa onwe ya dịka onye mba ọzọ, onye na-eche echiche, onye hụrụ Mozart na uri. E mekwara ya baptizim dịka "wolf steppe", ịbụ oke Aghọtaghị ya na owu ọmụma. Otu abalị, o kpebiri ịpụ, ma mezuo ya na uzo n’onu ulo ihe nlere nke “Ime Anwansi”, ma odighi agafe ya. Nso ebe ahụ, na-agba n'ime onye ahia, onye, mgbe obere mkparịta ụka gasịrị, nye ya obere akwụkwọ.
Mgbe ọ laghachiri n'ọnụ ụlọ ya, Harry chọpụtara na akwụkwọ ahụ bụ maka ya. Ọrụ ahụ nwere usoro ntụgharị uche nke nkà ihe ọmụma banyere omume ọma, nsogbu na adịghị ike nke anụ ọhịa wuru onwe ha. Otú ọ dị, ederede ahụ na-ebu amụma igbu onwe onye nke protagonist, ihe ọ kwenyere na ya, n'ihi na ọ na-enwe mmetụta nke ndakpọ olileanya na ndụ ya.
Mgbe ije dị ogologo, Harry banyere na mmanya "Black Eagle", ebe zutere Hermine, nwa agbọghọ mara mma nke na-ara nwoke. Mgbe ahụ, Haller ghọrọ ụdị onye na-eso ụzọ ya ma kwenye irubere iwu ya niile (gụnyere igbu ya). Na nloghachi, a na-enye onye protagonist "ka ọ mụta ịnụ ụtọ ihe ụtọ nke ndụ."
Mgbe e mesịrị, Harry na-ezute Pablo, onye na-egwu egwu hedonistic na onye ọbịa nke Thelọ ihe nkiri Ime Anwansi. Ọzọkwa, Hermine na-egosi ya Maria, onye ghọrọ onye hụrụ Haller n'anya. N'ikpeazụ, onye bụ isi na-anwa anwa agba egwu ma chịa anụ ọhịa wolf na nwoke. Ọzọ, amaokwu ndị ahụ jupụtara n'ọchị, ọgwụ ọjọọ na ọkwa dị iche n'etiti eziokwu na akụkọ ifo n'ime Ime Anwansi.
N'ebe ndị na-enweghị isi nke ụlọ ihe nkiri ahụ, Harry nwetara ahụmịhe nke ụdị nrọ; Ọbụna ọ gafere ịkọwa nkà ihe ọmụma na ịdị adị na ụdị nke Mozart nke oge a na burlesque. Na nso ọgwụgwụ, Haller na-eme Hermine ụra gba ọtọ n'akụkụ Pablo, ọ que atụle dị ka a mgbaàmà iji mezuo uche nke nwa agbọghọ ahụ.
N'ikpeazụ, onye protagonist ahụ ji mma maa Hermine. N'ihi ya, a mara ya ikpe ịdị ndụ ruo mgbe ebighị ebi. Dịka akụkụ nke ntaramahụhụ ahụ, ọ ga-anagide ọchị nke ndị otu ụlọ ikpe ahụ ruo elekere iri na abụọ. Na mmechi, Haller kpebiri ịtụgharị ndụ ya, wee malite ịmụ ịchị ọchị maka ọdịnihu ya.
Banyere onye edemede, Hermann Hesse
Ọmụmụ na nwata
Ọ bụ Hermann Karl Hesse Amuru ya na obere obodo Cawl, Württemberg, Germany, na July 2, 1877. Nna ya, Johannes Hesse, bu onye ala Estonia nke sitere na ndi Christian nkwusa; nne ya bụ Marie Gundert onye India mbụ. N'oge ọ bụ nwata, obere Hermann ọ mụrụ Latin na Göppingen n'etiti 1886 na 1891.
Site na 1891 onye edemede n'ọdịnihu Ya na ndị mụrụ ya nwere esemokwu siri ike ma nwee nnukwu nsogbu nsogbu (nke o kwuru ọtụtụ ugboro mgbe e mesịrị). Ọzọkwa, ọ gbapụrụ n'ụlọ akwụkwọ seminarị ma nọrọ obere ọnwa isii n'otu ụlọ akwụkwọ ahụ. Na 1892, ndị mụrụ ya kpọgara ya n'ụlọ ezumezu dị na Stetten im Remstal n'ihi edemede igbu onwe ya.
Lọ akwụkwọ ikpeazụ ọ gara bụ ụlọ ọrụ pụrụ iche na Basel na Gymnasium dị nso na Stuttgart. N’afọ 1893, ọ gụsịrị ụlọ akwụkwọ praịmarị ma kwụsị ụlọ akwụkwọ. Mgbe nke ahụ gasịrị, ọ rụrụ ọrụ dị ka onye enyemaka na ụlọ ahịa elele ma mesịa bụrụ onye na-ere akwụkwọ na Tübingen. N'ebe ahụ ọ malitere ịgụ akụkọ ifo, ederede mmụta okpukpe na nkà ihe ọmụma site n'aka ndị edemede dịka Goethe, Lessing na Schiller, na ndị ọzọ.
Akwụkwọ mbụ ya pụtara na magazin Vienna na 1986, abụ uri ahụ Madonna. Mgbe e mesịrị, Hesse bipụtara Romantische liede (1898) na Eine Stunde na -egbochi Mitternacht (1899). Na mkpokọta abụọ, Hesse gosipụtara mmetụta nke romantics German ama ama (Brentano, von Eichendorff na Novalis, ọkachasị).
Idebe akwụkwọ na alụm di na nwunye
Ihe ịga nke ọma nke akwụkwọ akụkọ ahụ Peter camenzind (1904) kwere Hermann Hesse ka ọ dịrị ndụ na-ede ihe n'oge ndụ ya niile. N'oge ahụ onye ode akwụkwọ German ahụ enweworị mmasị na ime mmụọ (ọkachasị, Hindu) ma tufuo ya maka ọrụ agha. N'akụkụ aka nke ọzọ, Onye edemede German ahụ nwere nsogbu ụfọdụ na ndụ ịhụnanya ya (ọ lụrụ di na nwunye ugboro atọ).
Maria Bernoulli, n'etiti 1904 na 1923
Ruth Wegner, 1927 ruo 1927
Ninon Dolbin, site na 1931 ruo mgbe Hesse nwụrụ na 1962 site na ụbụrụ ọgbụgba ụbụrụ.
Ọrụ ndị a kacha mara amara
Steppe wolf (1927)
egwuregwu nke ndị abata (1943).
Ọrụ Hermann Hesse gụnyere ihe karịrị akwụkwọ 40 gụnyere akwụkwọ akụkọ, obere akụkọ, uri na ntụgharị uche, tinyere ihe karịrị 3000 nyocha na dezie. N’ihi ya, ọ bụghị ihe ijuanya na ọ rewo ihe karịrị nde 30 n’ụwa nile, sụgharịrị ya n’ihe karịrị asụsụ iri anọ. Tụkwasị na nke ahụ, onye edemede German nwere ọtụtụ ihe ndekọ ederede (ihe karịrị mkpụrụedemede 40) na ọ bụ ọmarịcha ihe osise.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Novela » Steppe wolf
José Ángel Valente. Afọ ncheta ọnwụ ya. Eke